Iitatato zokubetha kwentliziyo | Ukuzoba
Iitattoo zokubetha kwentliziyo, elula kunye nenomdla
USusana godoy | | Iitatto ezinemilo
Kwaziwa njenge Iitattoo ze-EKGInyani yile yokuba olu hlobo lweetattoo zikwimfashini ngenxa yokulula kwazo kunye nokuqaqamba xa kufikwa ekumelweni kwesikhumba.
1 Intsingiselo yeetattoos zentliziyo
2 Umvambo wentliziyo, uyilo lwantlandlolo
2.2 U msebenzi
3 Umgca weTatoo yobomi, yeyiphi eyona ndawo ibalaseleyo yokuthwala?
4 Iitattoo ze-EKG
4.1 Ii-EKG tattoos ezinamagama
5 Iifoto ze-Heartbeat Tattoos
Intsingiselo yeetattoos zentliziyo
Los Iitattoo zokubetha kwentliziyo ziyindlela entle yokukhumbula umntu esimthandayo ongasenathi. Uyilo olusikhumbuza ngomgca olungileyo phakathi kobomi nokufa.
Kwaye kukuba ngokujonga nje ezi tattoos, ndiqinisekile ukuba uya kuzinxibelelana nokubek 'esweni okuqhelekileyo esikufumana ezibhedlele kwaye okusetyenziselwa ukulawula nokubek' esweni ukubetha kwentliziyo. Iliso eliza kukhupha i-beep xa eli lungu libalulekileyo liyeka ukusebenza (kunokuba libethe). Nangona kunjalo Yitattoo edla ngokwenziwa ingekuko ukukhumbula umntu ozalana naye okanye oswelekileyo, kodwa ngokuchasene noko.
Los Iitattoo zokubetha kwentliziyo Ikwayindlela yokubhiyozela ukuba sikwazile ukuqhubela phambili kwaye soyise imeko yezonyango. Ukuphuma kwi-coma, ubomi okanye ukufa, njl. okhethekileyo.
Los Iimpawu ze-EKG (i-HearthBeat) Dlulisa intlawulo enzulu yeemvakalelo ngenxa yazo zonke iintsingiselo ezinxulumene nayo. Kwaziwa njenge "Umgca wobomi", Imile njengophawu olunomtsalane kakhulu kwabo bafuna itattoo esikwe ngokwasemphefumlweni.
Ngokuphathelele Iindawo ezilungileyo zokufumana tattoo yentliziyoInyani yile, njengoko sinokubona kwigalari engezantsi, uninzi lwabantu lukhetha isihlahla, ingalo okanye icala lesifuba. Ngayiphi na imeko, ndingasoloko ndikhetha uyilo olucekeceke, olulula nolula kancinci. Ngale ndlela siya kuqinisekisa ukuba iya kugqithisa ubungakanani bobuhle kunye nobuncinci.
Umvambo wentliziyo, uyilo lwantlandlolo
Njengoko ngoku sisazi ukuba zeziphi ezona ntsingiselo zisetyenziswayo, kuya kuhlala kukho umntu ofuna ukuya phambili. Akunyanzelekanga ukuba ihlale ilwalamano oluhle nomntu. Sinokuzibamba iimvakalelo zethu. Iimvakalelo ezidlula uthando kusapho, kodwa zijolise kolunye uthando kunye nothando lomntu.
Ukuba umculo yenye yeemvakalelo ezenza ukuba intliziyo yakho inyakaze, unokuyibonisa kumvambo onje. Ukubetha kwentliziyo kuya kunyuka ngesingqi, ngenxa yeendlela ezahlukeneyo zomculo.
Ngendlela efanayo, unokuhlala ukhetha uyilo oluthile kulo. Zombini amanqaku omculo njengoko izixhobo inokuba zezizo ezihamba kunye nawe xa ugqiba itattoo yokubetha kwentliziyo yakho. Indlela yokwenza icace ukuba umculo yenye yeenjini zakho ezinkulu ebomini.
Kungenxa yokuba abanye abantu bathabatheka ngamaphupha abo omsebenzi. Banokuhombisa umvambo weyona yona yokuqala. Inkqubo ye- iiTatoo ezinomxholo wobuchwephesha Zezinye zezinto ezibalulekileyo kulusu lwethu.
Ukuba uziva uzinikele kumsebenzi othile kwaye ufuna ukushiya umbono emzimbeni wakho, akukho nto idibanisa ukubetha kwentliziyo yakho nayo. Kuya kuhlala kukho uyilo olukhetheke kakhulu ukuze ufumane olufanela ubuntu bakho kwaye lukumele.
Kukho iziseko ezininzi zobomi, ukuze kugqitywe. Into enzulu kakhulu apho sinokuyilungisa kwakhona xa isiza fumana umvambo omtsha. Sisebenzisa olu luyilo ukuze amagama amathathu abe yinxalenye yeengcinga zethu.
Ukholo, ithemba nothando Ikakhulu zimelwe ziitattoos zokubetha kwentliziyo. Ngendlela ecekeceke kakhulu siya kuba nomnqamlezo ukufuzisela ukholo. Ngaphandle kwamathandabuzo, uthando luya kuhlala lumelwa yintliziyo kunye nethemba, ngekhefu lentliziyo. Unokubatattoo nangayiphi na indlela oyifunayo. Uyayazi into abayithethayo: ulandelelwano lwezinto alutshintshi imveliso.
Umgca weTatoo yobomi, yeyiphi eyona ndawo ibalaseleyo yokuthwala?
Enkosi kwinto yokuba ngu uyilo olulula kakhulu, akuyi kuba nzima ukubumba umzimba uphela. Eyona nto isengqiqweni kukuba uyilo oludibeneyo kodwa ngaphandle kwemilinganiselo emikhulu. Ke, ukwazi oku, unokukhetha iindawo ezincinci. Ndithetha isihlahla okanye iqatha, kunye namagxa okanye intamo. Nangona bonke bephela, kusithiwa a I tattoo yomgca wobomi Inophawu olungaphezulu kwesihlahla. Kutheni, kuba yindawo ebalulekileyo ukuthatha ukubetha kwaye uyilo olunje luya kubhekisa kuloo mzuzu.
Ke, ngaphandle kwenyani yokuba akukho mntu unokukuxelela apho kufanelekileyo okanye ungafanele ufumane itattoo, kuya kufuneka uyazi ukuba kuhlala kukho uyilo olunokuthi lulungelelaniswe bhetele kunenye indawo kunenye. Nangona ilayini yobomi tattoo ilula, kuya kufuneka unxibelelanise uphawu lwayo nayo. Yiyo loo nto abantu abaninzi, ukongeza ekunxibeni esihlahleni, bekwabeka kwi indawo esondele entliziyweni. Uphi oyithandayo kakhulu?
Okubiziweyo Iitoto ze-electrocardiogram zahlukile phantse akukho kwinto edlulileyo. Onke amahlelo ayasebenza kwiitatoos esizibonisa kuwe namhlanje. Inkqubo ye- Iitattoo ze-EKG Bahamba ngentliziyo eyongeziweyo. Kule meko, unokwenza loo ntliziyo iphambili ngakumbi kunoyilo lonke ngokongeza umbala obomvu. Indlela yokumela ubomi, ibetha yomelele kwaye yomelele. Ngamanye amaxesha sinokubona amagama afanelekileyo edityaniswa.
Ii-EKG tattoos ezinamagama
UsaphoNgaphandle kwamathandabuzo ayitsho into yokuba la magama aya kuba ngawabantu ababaluleke ngokwenene. Abo bantu abakhoyo okanye abebekho ebomini bethu kwaye ngaphandle kwabo, ngekhe kufane. Ngamanye amaxesha, endaweni yegama elifanelekileyo, sinokubhekisa kulo lonke iseti labo bantu basecaleni lethu kwaye sifuna ukubenza soloko usondele entliziyweni yethu. Kungenxa yoko igama elithi "Usapho" okanye "Abahlobo" lihlala limi ngaphandle kwezi tatto ze-electrocardiogram.
Amabinzana amafutshane: Siyathanda Iitattoo ezinamabinzana amafutshane! Zininzi kwaye zahlukahlukene kakhulu esinokuzifumana. Ibinzana elilula kodwa elithe ngqo elinentsingiselo engaphezulu kwenye. Ewe kule meko, siza kudibana nabo. Ewe kunjalo, zihlala zingamabinzana ahambelana nenyani yokuphila. "Phila nje" okanye "uCarpe Diem" bahlala babini yiminqweno emihle yokuphumeza le ndima.
Ngaphandle kwamathandabuzo, sishiywe kukuba ezi ntlobo zeetatoo zinentsingiselo enkulu, nangona uyilo lwazo lulula. Banokubhekisa kuyo uthando lwenyaniso, njengokuba u-el Ndikhumbula umntu ongasekhoyo okanye ukubuyela ebomini emva komgodi ombi. Ngoku siqonda ngakumbi kunangaphambili ukuba iitattoos zokubetha kwentliziyo azikaze ziye kwisitayile. Ucinga ntoni?.
Iifoto ze-Heartbeat Tattoos
Iitatto ezimile okweentliziyo, indalo enokwenzeka
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitatto ezinemilo » Iitattoo zokubetha kwentliziyo, elula kunye nenomdla
Iimpawu zothando ezingunaphakade
Iitattoos ezincinci eziza kujongeka zilungile kule minyaka idlulileyo